Tsy mahafatifaty ianao izao? | Martech Zone
Nisy olona nilaza taminay fa izahay, na ny azy fangatahana fananganana endrika, tsy “vetaveta”. Amin'ny lafiny sasany dia heveriko fa marina izany olona izany. Ny endriny, tsy manaitaitra ny endriny, fa ho an'ireo olona mampiasa azy ireo ary miankina amin'izy ireo mba hanangonana angon-drakitra, izy ireo, raha tsy seksi, dia manan-danja tokoa
Ka ahoana no anaovanao tompona orinasa, mpivarotra, sns, izay manana vokatra na serivisy tsy "mahamenatra" manao azy ho "mahamenatra"? Ireto misy fomba vitsivitsy.
Lazao ny tantaran'ny mpanjifanao: Ny mety dia manana orinasa mahaliana mampiasa ny serivisinao na ny vokatrao ianao. Mamorona fandinihana tranga. Avelao ny mpanjifa handefa ao amin'ny bilaoginao, hanao fanadihadiana miaraka amin'izy ireo ary apetraho amin'ny tambajotra sosialinao. Mankanisa any amin'ireo bilaogera eo amin'ny sehatra misy anao miaraka amin'ny tantaran'izy ireo, ny fahombiazany. Amin'ny fifantohana amin'ny fampiasana mangatsiatsiaka sy mahavariana ny vokatrao dia ataonao manaitra bebe kokoa sy manokatra làlana vaovao hiresahan'ny olona na hanoratanao momba anao izany.
Vohay ny Hood: Manana teknolojia tena mahaliana mitondra ny orinasanao? Namorona rafitra tokana ve ianao hanampiana amin'ny fampandehanana ny orinasanao? Ny mety dia ny orinasanao manana zavatra tsy manam-paharoa mandroaka azy (na tsy hahomby ianao). Asongadino ireo lafiny tsy manam-paharoa amin'ny orinasanao ary avelao ny olona hijery ao ambadiky ny lambam-baravarana. Azo inoana fa ho zavatra hahaliana ny mpanjifa na ny mpikambana amin'ny gazety izany.
Avelao ny mpanjifanao hanao ny tolotrao: Hafa kely noho ny voalohany io. Ny hatsaran'ny tambajotra sosialy dia ny famelana ny mpanjifanao hiresaka momba anao. amin'nyFormstack manara-maso izay lazain'ny olona momba anay izahay Twitter. Raha tokony hitandrina ireo zavatra mahafinaritra rehetra ireo ho an'ny tenantsika fotsiny isika dia namorona a Twall of Fame Nanao pirinty sy nanamboatra ireo bitsika tsara ireo izahay ary nametraka azy ireo teo amin'ny lalantsaran'ny biraonay. Nandefa bitsika azy ireo indray izahay ary nandefa ny sasany tamin'ireo bitsika avy tamin'ny rindrina tao amin'ny pejinay Facebook sy ny bilaoginay. Nahatonga ny olona hiresaka momba antsika indray izany ary nanintona ny sasany tamin'ireo olona nanoratra ny heviny tany am-boalohany hamerina mandefa ny bitsika. Miteraka fientanam-po momba ny marikao sy ny vokatrao izy io satria avy amin'ny mpampiasa tena izy amin'ny serivisinao. Mahatonga ny mpanjifanao hiresaka momba anao izy io, milaza amin'ny sakaizany hoe "manao firaisana" ianao ary ny antony itiavany anao.
Ny tsy fanananao ny gadget mamiratra indrindra na ny fampiharana tambajotra sosialy malaza indrindra amin'ny Internet dia tsy midika hoe tsy mahaliana ny orinasanao. Mihady lalindalina kokoa noho ny etỳ ambonin'ny tany ianao dia jereo izay hampiteny ny olona. Mety tsy hihady lalina loatra ianao.
Tags: tantaran'ny mpanjifaformstackfitantarana tantara
Amporisiho ny marikao amin'ny kaonferansa miaraka amin'ny hoditry ny laptop
Tsy mpampiasa anao ianao
20 Nov 2009 tamin'ny 6:49 PM
Heveriko fa ny 'Not Sexy' dia mari-panajana voninahitra eto Indiana. Betsaka amin'ireo orinasa eto no manao rindranasa izay tsy dia mahafatifaty loatra… fa mandeha izy ireo. Milamin-tsaina izy ireo, manao refy ary manao izay tian'ny mpanjifa hataon'izy ireo. Tsara ny mahatsikaiky rehefa mitady daty ianao, nefa raharaham-barotra izany!
20 Nov 2009 tamin'ny 6:23 PM
Azonao atao koa ny manararaotra ny fientanam-pon'ny olona iray izay tena mahita ny "firaisana ara-nofo" amin'ny zavatra ataonao. Mety ho mpanjifa, mpiasa, mpiara-miasa amin'ny indostria, na olon-kafa tanteraka izany.
Nanana mpampianatra calculus aho izay naseho tamim-pahitana momba ny fomba fiasan'ny matematika. Napetrany teo amin'ny solaitrabe ny fampitahana sy ny kisarisary ary saika nirohotra tamim-pifaliana noho ny hatsarany rehetra. Nitsiky ny zazakely izy ny marainan'ny krisimasy. Raha tao amin'ny efitrano niaraka taminy ianao dia tsy ho hitanao ny hahita ny hakanton'ny fifandraisana misy eo amin'ireo isa. Areti-mifindra ny hafanam-pony. Nanao ny calculus ho seksi izy.
20 Nov 2009 tamin'ny 6:51 PM
Clay teboka tsara ary manaiky aho. Ny fientanam-po, ny fientanam-po, ny fananan'ny olona iray amin'ny vokatra na orinasa iray dia azo ampiasaina tokoa. Na izany aza, tsy azoko antoka fa afaka nahita ny firaisana amin'ny calculus aho!